Wararka - Waxyaabaha kiimikada ah iyo adeegsiga p-hydroxybenzaldehyde
Waxyaabaha kiimikada ee p-hydroxybenzaldehyde
P-hydroxybenzaldehyde waxaa si guul leh loogu isticmaalay daawada, qurxinta, cuntada iyo qeybaha kale, iyo kala duwanaanta dalabkeeda wali wey sii fideysaa Haddii aad rabto inaad siiso ciyaar buuxda waxqabadkeeda, markaa sifooyinka kiimikada waa in si fiican loo barto. Tusaale ahaan, qodobbada soo socdaa waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah.
1. P-hydroxybenzaldehyde waa caraf udgoon, taas oo ka dhigaysa noocyo kala duwan oo udgoon ah ama cunno cunno ah. Alaabtan, udugga ayaa ka sii xoog badnaan doona.
2. Ma sahlana in lakala baxo. Waxay ku fiicnaan doontaa cadaadiska caadiga ah laakiin ma kala daadan doono kumana sii deyn doono uumiga biyaha. Marka waxqabadkeedu waa mid xasilloon.
3. Sababtaas awgeed, p-hydroxybenzaldehyde ayaa si ballaaran loo isticmaali doonaa.
Kuwani waa sifooyinka kiimikada ee p-hydroxybenzaldehyde. Haddii aad u baahatid iyaga, waxaad ka heli kartaa soo saare xirfadle ah oo iibsada.
P-hydroxybenzaldehyde waa nooc ka mid ah walxaha kiimikada, kaas oo door muuqda ka ciyaara dhinacyo badan, sida badanaa loo isticmaalo sameynta walxaha soo socda.
1. Fungicide iyo herbicide
Tani badanaa waa sababta oo ah p-hydroxybenzaldehyde waxay leedahay shaqada dilka bakteeriyada, sidaa darteed waxay dili kartaa bakteeriyada ama haramaha si deg deg ah markii loo isticmaalo soo saarista bakteeriyada ama herbicide
Waa nooc ka mid ah cadarka, maxaa yeelay p-hydroxybenzaldehyde waxay leedahay udgoon gaar ah, marka waxay aad ugu habboon tahay samaynta cadarka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay qayb ka tahay dhadhanka cuntada iyo xilliyada.
Tani waa dawo bakteeriyada, baahida ka jirta Shiinaha waa mid aad u ballaaran, taas oo sidoo kale ah muuqaalka qiimaha daawada ee p-hydroxybenzaldehyde.
Marka lagu daro qodobada kor ku xusan, p-hydroxybenzaldehyde sidoo kale waxaa lagu soo saari karaa anisaldehyde iyo walxo kale, waxaa la dhihi karaa baaxadda dalabkeedu waa mid aad u ballaaran.